Libuye nemband' esikhova Inxeba kwii-Oscars - Vernac News
Ekapa -Ilinge lomboniso bhanya-bhanya Inxeba lokufikelela kumagqibela ka nkqoyi kwiimbasa zee-Oscars libuye nemband’ eskhova.
Lomboniso bhanya-bhanya ongundaba-mlonyeni oveza impatho-mbi yamadoda alala namanye kwisiko lolwaluko ubutyunjelwe kwibakala Umboniso Obalaseleyo Wamazwe angaphandle (Best Foreign Film).
Imiboniso etyunjelwe amagqibela kankqoyi kwelibakala yile: A Fantastic Woman, The Insult, Loveless, On Body and Soul kunye ne The Square. Oku kuchazwe namhlanje kumsitho obubanjelwe eBeverly Hills, eLos Angeles.
Lomboniso sele ezuze iimbasa ezilishumi elinethoba kumazwe ngamazwe.
Izimvo ziyabetha-bethana ekhaya ngalomboniso nodidiyelwe ngamaveza-ndlebe kwisiko lamaXhosa uJohn Trengove kunye no Malusi Bhengu bevuselelwa yincwadi ka Thando Mgqolozana esihloko A Man Who is Not a Man. Iinkokheli zemveli azifuni nokuva ngalomboniso neziwubona njengothengisa ngesiko lakwaXhosa. Kwelinye icala amatshantliziyo wemiba edibene nempatho-mbi ngokwesini ayawukhuthaza lomboniso njengobhentsisa ngokungenalusini inyani yokuxhatshazwa nokujongelwa phantsi kwamadoda alala namanye kwisiko lolwaluko.
Amagqibela kankqoyi wezimbasa zee-Oscars azakubanjwa ngomhla we-4 eyoKwindla 2018.
Tagged Inxeba, John Trengove, Malusi Bhengu, Oscars, Thando Mgqolozana
UCT commits to assist walk-in applicants